Hay’adaha ammaanka oo aqoonsaday ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee lagu qaaday S.Y.L Hotel |
Hay’adaha ammaanka oo aqoonsaday ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee lagu qaaday S.Y.L Hotel
Laamaha ammaanka ee Gobolka Banaadir, ayaa waxay si buuxdo ay u aqoonsadeen ninkii geystay weerarkii ismiidaaminta, ee maalintii Khamiista lagu ekeeyay Hotelka S.Y.L, oo ku yaala agagaaraha Madaxtooyada Somaliya.
Ninkaan, ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Cismaan Jimcaale, waxayse dadku u garanayeen (Dhagey). Dhagey wuxuu sanad ka hor uu ka soo laabtay dalka Switzerland ee cariga Qaaradda Yurub.
Hooyadii waxaa lagu magacaabaa Saafi Dhibood Xaashi. Waxay sanadkii 2008-dii ay ku indho beeshay duqeymihii lagu garaaci jiray Suuqa Bakaaraha, intii ay gacanta ku hayeen mintidiinta Ururka Al Shabaab.
Maxamuud, ayaa waxa uu saacadaha uu ku samayn jiray afaafka hore ee Masaajidka Xareed oo ku yaala agagaaraha Isgoyska Baar Ubax, intii aanu Yurub tagin. Wuxuu ka soo mid noqday dagaal-yahanadii Midowga Maxkamadaha Islaamiga.
Waxa uu sanadkii 2007-dii uu tahriib xagga badda ah uu ku galay dalka Switzerland oo dhalasho uu ka helay. Muddo sanad ah ayuu xilligaan joogay dalka Somaliya. Wuxuuna ka mid ahaa dagaal-yahanadii Al Shabaab ee laga saaray Degmada Baraawe, 5-tii bishii October ee sanadkii hore.
Dhagey, ayaa muddo billo laga jooggo wuxuu Magaalada Muqdisho uu ku jeex jeexay basaboorkii sharciga ahaa, ee uu ka helay dalka Switzerland, isagoona wax badan hooyadii ka diiday in dalkaasi uu dib ugu laabto.
Ilo lagu kalsoonaan karo, ayaa Dhacdo.com u sheegay in Dhagey uu deegaan ahaan ka soo jeedo Koonfurta Magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug, oo Maamulka Galmudug uu ka arrimiyo.
Weerarkaan, ayaa waxaa ku dhimatay ugu yaraan shan ruux oo ninkii is qarxiyay uu ku jiro. Waxaana lagu soo beegay, xilli S.Y.L Hotel uu shir kaga soconaayay Saraakiil ka socoto Dowladda Turkiga. Viagra Super Active no rx, order dapoxetine.